ဝက်ခြံ၊တင်းတိတ်ကင်းတဲ့အသားအရေမျိုးပြုပြင်စို့ | YUYU BEAUTY
You are at:Home»Makeup»၀က်ခြံနှင့် တင်းတိပ်ကို ချေဖျက်နိုင်၍ ကျန်းမာစိုပြေသော အသားအရေ ဖြစ်အောင် ပြု ပြင်ကြပါစို့လား!
၀က်ခြံနှင့် တင်းတိပ်ကို ချေဖျက်နိုင်၍ ကျန်းမာစိုပြေသော အသားအရေ ဖြစ်အောင် ပြု ပြင်ကြပါစို့လား!
By yuyu on	 02/02/2016 Makeup
အသားအရေပေါ်မှာအဆီပြန်ပြီး ၀က်ခြံနှင့် တင်းတိပ်ထွက်လာကဘာကြောင့်ပါလဲ?
＊ ဝက်ခြံလိုအပ်တာထက်ပိုထွက်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်း၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်း တို့ကြောင့် အသားအရေရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်၍ ဝက်ခြံထွက်တတ်ပါသည်။
＊ အိပ်ရေးမဝခြင်း၊ အာဟာရမလုံလောက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ ဟော်မုန်းပမာဏမမျှတခြင်းတို့ကြောင့်လည်း အရေပြားယိုယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါသည်။
＊ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်နှင့် နေလောင်ကွက်များ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ တစ်နည်းအားဖြင့် မယ်လမင်းဓာတ်များပြားခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းနှင့် အညစ်အကြေးများအရေပြားတွင် စုပုံနေသော ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။
＊ အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းသည် နဂိုမူလ ရေဓာတ်ပမာဏနှင့် အဆီပြန်ခြင်းပမာဏ များလိုက်၊ နည်းလိုက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသားအရေပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရခြင်းမှာ အသားအရေ ကျန်းမာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပါပဲ။
နဂိုမူလအတိုင်း ကျန်းမာသောအသားအရေ ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသားအရေတစ်ခုထဲကောင်းဖို့မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မှအရေပြားကျန်းမာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများရင် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူလျှေက်လည်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြေရှင်းတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီး Lotion, Milky lotion, Cream တို့ကိုသေချာစွာလိမ်းခြယ်သုံးစွဲခြင်းသည် အလုပ်ရှုပ်တယ်ဟုထင်သော ပျိုမေတို့အတွက် OSATOU KAKUMEI ကိုသုံးကြည့်ပါ။
OSATOU KAKUMEIကမည်သည့် အသားအရေအတွက်မဆို ကိုက်ညီအောင် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ Skin Care ထုတ်ကုန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံနှင့် တင်းတိပ်ထွက်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းများဖြစ်သော အသားအရေကိုနဂိုမူလကျန်းမာသောအသားအရေအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိပြီး၊ ချောမွတ်စိုပြေသောအသားအရေအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ လူတိုင်းကအားကျလောက်အောင်ဖြစ်လာမှာပါ။
အရင်ဦးဆုံး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Make Up Remover ဖြင့်မျက်နှာအားဖျက်ပေးခြင်း၊ ထို့အပြင်မျက်နှာပြင်အားဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် OSATOU KAKUMEI ကိုအသုံးပြုပါ။
OSATOU KAKUMEI ကို အသုံးမပြုမီ မိမိမျက်နှာပြင်တွင်ရှိသော မိတ်ကပ်(သို့မဟုတ်)အညစ်အကြေး များကို အရင်ဆုံး သန့်စင်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် လက်ကိုရေဆွတ်ပါ။
(2) OSATOU KAKUMEI ကို အသုံပြုပါမည်။
OSATOU KAKUMEI ကို ကွမ်းသီးစိတ်ခန့်ကို ဇွန်းဖြင့်ယူပြီး ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ရော၍ မိမိ၏လက်ဝါးပြင်ပေါ်တွင် နှံ့စပ်အောင် မွှေပါ။
မွှေပြီးသော OSATOU KAKUMEI အမှုန့်ကို မိမိ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အပြင်မှ အတွင်းသို့လှည့်၍ ပွတ်လိမ်းပါ။
(4) နှိပ်နယ်ပေးပြီး ရေဖြင့်ဆေးကြောပါမည်။
မျက်နှာအား ၂ မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပြီးနောက် ရေဖြင့်ဆေးကြောပါက နူးညံ့ဝင်းပကြည်လင်သော အသားအရေကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(*မှတ်ချက် – ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပါက ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါမည်။)
(5) အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
လက်၊ ခြေဖနောင့်၊ တံတောင်ဆစ်၊ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဦးခေါင်းအစရှိသော ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြား အသီးသီးတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်- ပထမဆုံးအသုံးပြု ပြီး နှစ်ရက် သုံးရက်ခန့်အကြာတွင် ၀က်ခြံ(သို့မဟုတ်)အဖုအပိတ်လေးများ ထွက်လာခဲ့သော် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။ ၀က်ခြံပုန်း(သို့မဟုတ်) အဖုအပိတ်များထွက်လာခြင်းမှာ အရေပြားအတွင်းပိုင်းမှ မကောင်းသောအရာများ၊ အဆိပ်အတောက်များ ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပူပန်မှုမရှိစေရန် ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း(Hokkaidoo)တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သော သကြားမုန်လာ၏ 100% သဘာဝအရင်းအမြစ်ကိုအခြားသောဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် စိတ်ချလက်ချ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ သကြားအမူန့်လေးများ၏ အစွမ်းသည် မွေးကင်းစကလေးမှစ၍ သက်ကြီးရွယ်အိုများအထိ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အရေပြား ကိုနူးညံ့စိုပြေစေပြီး ရေဓါတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါသည်။
(1) Zaw Gyi Mart – Online Shopping –
-Zaw Gyi Call Center 09-253027001, 09-253027002
Myanmar Abcom Co.,Ltd.